Maalinta: Maarso 18, 2020
Indhaha ayaa loo rogay gaadiid dadweyne sababta oo ah coronavirus, oo ka soo muuqday Shiinaha oo argagax weyn ku abuurtay adduunka oo dhan. Sida ku cad xogta uu helay weriye Mevlüt Yüksel, argagaxa feyraska corona wuxuu ku soo maray xarunta Marmaray Söğütlüçeşme Station. [More ...]
Khadka Malatya-Çetinkaya Km: 33 + 949 Wadada Wadooyinka Gaarka ah ee Tixraaca Dhismaha Malatya-Çetinkaya Line Km: 5/2019 KIK oo leh qiima ugu dhaw 708832 TL oo leh lambarka GDP ee TCDD [More ...]
Iyada oo aan waajib ku ahayn in sidaas laga sameeyo Izmir mooyee, baaqa ah inaan la bixin ayaa booskeeda heshay. Marka loo eego xogta Agaasinka Guud ee ESHOT, tirada dadka isticmaala gaadiidka dadweynaha ayaa hoos u dhacay 51,3 boqolkiiba. Digniinaha laga sameeyay baaxadda la dagaallanka khatarta cudurka 'coronovirus' waa mid ku habboon İzmir. [More ...]
Dhismaha saldhiga cusub ee basaska oo ay dhistay dowladda hoose ee Antalya ee magaalada Elmalı oo ku taal 10 mitir oo laba jibbaaran ayaa si xawli ah kor ugu kacaya. Shaqooyinku way sii socdaan dabaqa koowaad ee dhismaha saldhigga basaska, kaas oo dhismahiisa iyo sagxadihiisii ​​dhulka la dhammeeyey. Adeeg ilaa iyo 1970-yadii [More ...]
Coronavirus muujinaya saamaynta dunida ku xeeran iyo Turkey (Covidien-19) ka dhanka ah cudurka faafa ee Mersin degmada Metropolitan, ayaa sameynaya waxbarashada la cutubyada oo dhan waa in ay feejignaadaan. Waxay u furan tahay dadweynaha nadaafadda gaadiidka dadweynaha illaa loo wargaliyo shaqaalaha wixii faafa [More ...]
Abaabul nadaafadeed ayaa laga bilaabay dhamaan cutubyada Dowlada Hoose ee Gaziantep si looga hortago dhibaatooyinka caafimaad ee suurta galka ah. Ka hortagga cudurka 'Corona Virus' (COVID-19), oo saameyn ballaaran ku leh ajendaha adduunka, [More ...]
Sida lagu sheegay bayaanka uu soo saaray Havaist, Havaist wuxuu sii wadaa inuu si joogto ah ula shaqeeyo kooxdeeda oo dhan si loo yareeyo walaaca cudurrada faafa ee ku soo kordha xilliga qaboobaha iyo gaar ahaan coronavirus. [More ...]
Isagoo ka mid ah hay'adaha hoos taga degmada Kocaeli BÃ¼yÃ¼kŸŸehir, Ulaşımpark wuxuu shaaca ka qaaday in taraamka uu dhici doono 10 daqiiqo kasta ilaa maanta (Arbacada). door bidaan gaadiidka dadweynaha [More ...]
Si loo yareeyo culeyska Acemler Junction, halkaas oo celceliska maalinlaha ah ee baabuurta maalinlaha ah ee Bursa ay ka sii badan tahay Buundada Istanbul 15-ka Luul Martyrs, Mudanya Junction İzmir wadada isku xirka gacanta ayaa la furay gaadiidka qiyaastii 3 bilood ka hor. [More ...]
Tartanka sawirrada '' Exact Eastern Express '', oo si heer qaran ah loo abaabulay labadii sano ee la soo dhaafay, labaduba waxay si caalami ah u heleen 2020 iyo marka lagu daro Eastern Express, Van Lake Express iyo South Kurtalan [More ...]
Howlaha Xarunta Dalxiiska Isboortiga Xilliga Jiilaalka ee Sivas Yıldız waxaa si ku meelgaar ah loo hakiyey baaxadda tallaabooyinka la qaaday sababo la xiriira cudurka 'coronavirus' oo si baahsan ugu faafa dunida. Sivas Yıldız Xarunta Dalxiiska Isboortiga Xilliga Jiilaalka ee Mountain cusub coronavirus (Kovid-19) [More ...]
Duqa Magaalada Samsun Mustafa Demir ayaa carrabka ku adkeeyay in qaar ka mid ah xarumaha ku xiran degmada ay si kumeelgaar ah u xiran yihiin cabirrada coronavirus-ka, kuwaa oo noqday cudur faafa oo caalami ah, 'Si aad ah ayaan u adkeysaneynaa inaan qaadno tallaabooyinka, khatarta. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, ee sii wadaysa qaadista talaabooyinka ka hortaga cudurka faafa ee coronavirus, waxay sidoo kale ka fulisaa wasakhda ganacsiga iyo basaska magaalada kadib basaska iyo taraamyada. Sameynta shaqo dhakhso leh oo feejignaan leh [More ...]
GaadiidkaPark, oo ka mid ah kuwa ku xiran degmada Kocaeli Magaalo-Weyne, ayaa qaaday taxaddarro badan sababo la xiriira cudurka 'coronavirus' oo ku faafay adduunka dhowaan, kaasoo u oggolaanaya muwaadiniinta inay ku safraan jawi nadiif ah oo ka badan nadaafadda waddada. Macnaha guud, Akçaray [More ...]
Dhismaha Mersin Metro Dhismaha iyo Qandaraaska Iibsiga Gawaarida (Tender Dender) Adeegga Diyaarinta Dusha Dusha sare ee loogu talagalay Gawaarida Xamuulka, oo ay ku jiraan Iibsashada Maandooriyaha Kiimikada ee Wajiyada Isku Darka Dhirta (TÜDEMSAŞ)
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa heegan ku jirtay iyada oo leh dhammaan waaxyadeeda ku aaddan la dagaallanka coronavirus. Iyada oo la raacayo tilmaamaha Duqa Magaalada Mansur Yavas, waxaa la soo saaray go'aamo cusub oo digtooni ah. Khidmadda kirada waxaa laga qaadaa meherada ay leedahay Metropolitan [More ...]
Marka loo eego macluumaadka laga helo Dawladda Hoose ee Bursa, xaqiiqda ah in iskuullada ay yihiin ciidaha, shirkadaha shirkadaha gaarka loo leeyahay qaarkood ayaa u oggolaanaya shaqaalahooda, ama qaabka ay u shaqeeyaan meel fog ayaa ka jaray adeegsiga gaadiidka dadweynaha qeyb ahaan. 1 milyan maalintii [More ...]
Go'aanka Wasaaradda Waxbarashada Qaranka, ka dib nasashada tababarka inta u dhexeysa 16-30 Maarso, cufnaanta rakaabku waxay ku yaraaneysaa metrooga Metro, ANKARAY, Teleferik iyo EGO, halka agaasimeyaasha guud ee EGO gaar ahaan aaga basaska subaxdii iyo fiidkii. [More ...]
Taariikhda Taariikhda 18 Maar 1920 Geyve Strait waxaa gacanta ku dhigay ciidamada qaranka, buundooyinka iyo tunelada ayaa burburay. Khadadka Telefishanka bixiya isgaarsiinta wadada tareenka ayaa la jaray. Pike wuxuu raacaayaa rakaabkii 18-kii Maarj 1967 Anatolian Express, [More ...]